Madaxweynaha Puntland Saciid Deni Oo Qardho Ka Dhagax Dhigay Garoon Kubbadda Cagta Ah – Goobjoog News
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa magaalada Qardho ka Dhagax dhigay garoon kubadda Cagta ah oo loo dhisidoono qaab casri faa’idana u leh dhalinyarada iyo bahda ciyaaraha deegaanka.
Dhagax dhigga garoonka ayaa waxaa Madaxweynaha ku wehelinaayey masuuliyiinta maamulka gobolka Karkaar iyo kan degmada Qardho, Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Puntland iyo saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Maamulka Puntland.
Duqada degmada Qardho Cabdi Saciid Cusmaan Dheere ayaa sheegay in dhulkan ay ugu deeqeyn dhalinyarada degmada oo aad u jecel ciyaaritsa kubbadda cagta loona baahanyahay in si wadajiir ah dhismihiisa ay ugu qeyb qaataan shacabka iyo ganacsatada reer Puntland.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullahi Deni oo ka hadlay dhagax dhiggan ayaa sheegay in goobta loo asteeyey dhismaha garoonka ay tahay meel ku haboon oo siman, Madaxweynaha ayaa ku booriyey Maamulka degmada Qardho in dhulka ku hareeraysan garoonka laga dhigo dhul dowladeed si mustaqbalka looga faa’iidaysto.
Madaxweynaha Dawlad goboleedka Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa kormeeray saldhigga iyo qaybta degmada Qardho, waxaana uu Madaxweynuhu kulan gaar ah la qaatay taliyaha qaybta qobolka Karkaar iyo Saraakiisha ciidanka Booliska degmada Qardho.